चर्चित गायक प्रमोद खरेल पत्नीकाे जन्मदिन, छोरी जन्मेपछि स्वास्थ्यलाभ गराइरहेकि श्रीमतिलाइ यसरी भावुक हुदै लेखे जन्मदिनकाे यस्तो स्टाटस! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > चर्चित गायक प्रमोद खरेल पत्नीकाे जन्मदिन, छोरी जन्मेपछि स्वास्थ्यलाभ गराइरहेकि श्रीमतिलाइ यसरी भावुक हुदै लेखे जन्मदिनकाे यस्तो स्टाटस!
admin June 29, 2020 June 29, 2020 Uncategorized	0
काठमाण्डौ –केहि दिन अगाडि गायक प्रमोद खरेलका शुभचिन्तक र फ्यानहरु करोडौं छन् जसले उनलाई फलो गरिरहेका हुन्छन सबैमा एउटा खुशी छायो । त्यसैले पनि उनको बारेमा धेरैलाई जान्ने बुझ्ने इच्छा हुन्छ । बच्चा देखि बुढापाका सम्म उनका फ्यान छन् । आफ्ना गीतले स्टेजमा निकै तहल्का मच्चाउने गर्छन भने स्टेजमा उनि उत्रे पछि लाखौ दर्शकको साथ् मिल्छ गायक खरेल सामाजिक संजालमा पनि सक्रिय छन् ।
नेपालमा हुन् या बिदेशमा घटेका घटनालाइ नियाल्दै बेलाबेलामा आफ्ना विचारहरु राख्ने गर्छन । त्यसैले पनि उनका सुभचिन्तक र फ्यानहरु करोडौ छन् । केहि दिन अघि चर्चित गायक प्रमोद खरेल बाबु बनेका हुन् । उनी छोरीका बाबु बनेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफु छोरीबो बाबु बनेको जानकारी गराएका थिए । उनले घरमा लक्ष्मीको आगमन भएको बताउंदै निकै खुसि भएको व्यक्त गरेका थिए ।